In Love , We Trust ! ( #ချစ်​ခြင်းတွင်​ယုံကြည်​ပါ၏ ) - OhSeKitty - Wattpad
In Love , We Trust ! ( #ချစ်​ခြင်းတွင်​ယုံကြည်​ပါ၏ )
( #ချစ်​ခြင်းတွင်​ယုံကြည်​ပါ၏ )
OTP : Taoris , Kristao
Type : Drama , Romance
Warning : This&#x27;s 20+ fic .. again ~~ 20+ fic .
★ Containing Raped and Dark Scenes ★
အချစ်​ဆိုတာ တကယ်​တမ်း​တော့ ယုံကြည်​ဖို့ အင်​မတန်​ခက်​တယ်​ ။ ဒါ​ပေမယ့်​ ... ယုံကြည်​ဖို့အ​ကြောင်းအရင်းရှာမ​နေဘဲ သူ့အ​ပေါ်ကိုသာ မျက်​စိမှိတ်​ပြီး ယုံကြည်​ကြည့်​လိုက်​ပါ ။ အချစ်​ကို ယုံကြည်​ခြင်းဖြင့်​ သင်​ကိုလဲ အချစ်​က ပြန်​ယုံကြည်​​ပေးပါလိမ့်​မယ်​ ။
Written by #Kitty
@Taorisismylife ဟုတ်​ .. ပြန်​​ပေးပါ့မယ်​ ​နော်​ .. ခဏ​စောင့်​ပါအုံး .. ဟီးဟီး
ficလေးကောလို့မေးတာ.....author nim အဲ့taoris eng ver လေးဘာသာပြန်တင်ပေးပါနော်..pls
author nim ဒါဟိုဘာသာပြန်ခိုင်းထားတဲ့ficလေးလား
Reply Get notified when In Love , We Trust ! ( #ချစ်​ခြင်းတွင်​ယုံကြည်​ပါ၏ ) is updated Continue with FacebookContinue